August 10, 2019 – AYA Bank
Memorable of AYA bank’s 9th Anniversary
Posted on August 10, 2019 November 8, 2019 by Pyae Kyaw
Memorable of AYA bank’s 9th Anniversary and according to the UN Global Compact and CSR Activity, AYA Bank kindly performed for the 9th Blood Donation Drive was held at National Blood Center (Yangon) on 10th August 2019 (Saturday). In this Donation Ceremony, 271 Staffs of AYA Bank Head Office (Rowe and Riverview)[…]
Posted on August 10, 2019 September 2, 2019 by Sandar Win
အလှူအတန်းဆိုတာ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှမဟုတ်ပါဘူး . . . ကျွန်ုပ်တို့မှာ ငွေကြေးထက်ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ လှူနိုင်တဲ့ အရာတွေ ရှိပါတယ် . . . ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စီးဆင်းနေတဲ့သွေးဟာ လိုအပ်နေတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ သွေးလှူဒါန်းခြင်းဟာ မွန်မြတ်တဲ့အလှူဒါနဖြစ်သလို ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျော့ချခြင်း။ ၂။ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချမှုကို အထောက်ကူဖြစ်စေခြင်း။ ၃။ သွေးအားပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးခြင်း။ ၄။ သွေးတွင်း ကောလက်စတောများ လျော့ချပေးခြင်း။ ၅။ သွေးနီဆဲလ် ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်တင်ပေးခြင်း။ ၆။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် နုပျိုလန်းဆန်းစေခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ ယခုနှစ် သွေးလှူဒါန်းခြင်း အစီအစဉ်ကိုတော့ ဩဂုတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ ၂၀၁၉[…]